Marka la eego xaaladda yaraanta kheyraadka dabiiciga ah iyo ka warqabka saameynta dhaqdhaqaaqa aadanaha ee deegaanka, u heellanaanta hab deegaan ayaa inta badan loo arkaa inay tahay carqalad ku ah waxqabadka dhaqaalaha. Iyada oo loo marayo MOOC-kan, waxaan u soo bandhignaa dhaqaalaha wareegtada ah sidii kabaal loogu talagalay hal-abuurka iyo abuurista qiime dhaqaale oo leh saameyn togan oo xooggan. Waxaad ogaan doontaa fikradaha kala duwan ee dhaqaalaha wareegtada ah, oo u habaysan laba tiir: ka hortagga qashinka iyo, halka ku habboon, soo kabashada. Waxaad arki doontaa qeexitaannada hay'adaha, laakiin sidoo kale caqabadaha uu ka jawaabi karo dhaqaalaha wareegtada ah, iyo sidoo kale rajada iyo fursadaha ay ku bixiso heerarka dhaqaalaha iyo ganacsiga.
Labada mishiin ee qashinka iyo macaamiisha kheyraadka, dhammaan noocyada ganacsiga waxaa saameeya isbeddelka lagama maarmaanka ah ee dhaqaalaha wareegtada. Iyada oo wareysiyo lala yeeshay aasaasayaasha astaanta bilawga ah ee jiilkan cusub ee shirkadaha saameynta leh (Phenix, Cup Clean, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) iyo khabiiro (Phenix, ESCP, ADEME, Circul'R) waxaad heli doontaa mashruucyo ganacsi oo hal abuur leh waxaadna ka faa'iidaysan doontaa jawaab celintooda si aad u bilowdo tacaburkaaga.
Ganacsi-ganacsiyeedka dhaqaalaha wareegtada ah Diisambar 13, 2021Tranquillus
READ Bilaash Isticmaal xulashooyinka kororka
horeNECTAR: Nematodes Dalagga Taxonomy Arthropods
socdaLaga soo bilaabo atamka ilaa bini'aadamka: asalka ereyada sayniska